Ngokubanzi - Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi (Iphepha 6)
I-Intel iya kubamba phantse zonke iiprosesa zayo zokuphelisa iSpecter kunye neMeltdown
I-Intel iya kubamba zonke iiprosesa ezingaphantsi kweminyaka emi-5 ukuphela kwenyanga ukuphelisa iMeltdown kunye neSpecter kwinto enye yokuwa.
U-Apple wenze intshukumo engaqhelekanga ekuvumela ukuba ufake iinguqulelo ezindala ze-iOS
U-Apple wenza uthotho lweentshukumo ezingaqhelekanga ezingaqhelekanga kwinkampani kwaye oko kuku ...
Eyona nto ibalaseleyo kwi-CES 2018
Inye iphelile eyona teknoloji inkulu yabathengi ethe yabanjwa ngonyaka eLas Vegas, lixesha lokushwankathela
I-JBL iveza izithethi zayo ezintsha eziphathwayo
Ifom ye-JBL, eyinxalenye yeqela le-HARMAN laMazwe ngaMazwe, ngoku lisezandleni zeSamsung, lisandula ukwazisa izithethi ezintathu eziphathwayo ezifika endaweni yabo bangaphambili: JBL Clip 3, JBL GO 2 kunye JBL Xtreme 2
Ezi zintsha ziSony Xperia XA2, XA2 Ultra kunye neL2
I-Sony yamazwe aphesheya u-Sony iveze i-CES inqanaba elitsha eliphakathi eliza kuyazisa kwintengiso kulo nyaka: I-Xperia XA2, i-Xperia XA2 Ulta kunye ne-Xperia L2
I-Kodak iya kuba ne-cryptocurrency yayo
I-Kodak isungula eyayo i-KODAKCoin cryptocurrency. Fumana ngakumbi malunga nokuqaliswa kwemali entsha yedijithali yinkampani.
I-Fisker E-intshukumo, imbangi ende yeTesla
Ukuthatha ithuba lokuphumelela kokuphakama nokusasazeka njengoko kunjalo nge-CES 2018, uFisker wayefuna ukothusa abantu bendawo kunye nabantu abangabaziyo ngokunikezela ngokusesikweni inguqulelo yokuqala okanye umfuziselo wendlela emangazayo yeFisker E-motion.
I-AOC ibhengeza ngokusesikweni inkxaso-mali ye-esports kwihlabathi liphela nge-G2 Esports
Namhlanje, imidlalo ye-e iyaqhubeka nokufumana umhlaba kwihlabathi liphela kwaye ukuze isebenze iyafuneka ...
IPanasonic Lumix GH5S, ikhamera engenasibuko, ividiyo ye-4k kunye ne-ISO engama-51.200
Inkampani yaseJapan iPanasonic, izise umlandeli we-GH5, i-GH5S, nge-ISO efikelela kuma-51.200 njengeyona nto iphambili xa kuthelekiswa neyangaphambili.
Ukuthengiswa kwekhasethi kukhuphuke ngo-2017
Kunyaka ophelileyo u-2017, ukuthengiswa kwekhasethi kunyuke kakhulu. Oku kungenxa yesandi sesibini seemveliso zokubheja kwi-retro
Ikhadi lokuqala lokuthenga ngetyala elinomfundi ofunda ngeminwe ngoku liyinyani
Ikhadi lokuqala lokuthenga ngetyala elinomfundi ofunda ngeminwe ngoku liyinyani. Fumana ngakumbi malunga nekhadi letyala leGemalto
Iilaptops ezintsha ze-Acer eCES: Swift 7, Nitro 5 kunye neChannelbook entsha
I-Acer ikhona kwi-LAs Vegas apho kubanjwa khona iteknoloji ye-CES. Kulo nyaka kuthathe iilaptops ezininzi kuzo zonke izinto ozithandayo
I-China ifuna ukubuyela eNyangeni kulo nyaka, ngeli xesha ngokuthunyelwa kwezityalo kunye nezinambuzane
I-China ifuna ukubuyela eNyangeni kulo nyaka u-2018, unyaka apho imisebenzi emininzi kwisathelayithi icwangciswe zii-arhente ezahlukileyo zasemajukujukwini kwaye i-China iyakuthatha indawo ngokuthumela izityalo kunye nezinambuzane.
I-iPhone X, esona sipho sinqwenelekayo ngeli xesha leKrisimesi
Emva kokulinda iinyanga ezimbalwa ukusungulwa kwayo kwintengiso nasemva kokubona indlela esiva ngayo izinto ezilungileyo malunga ne-iPhone X, ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthenga i-iPhone X.
Isamsung ityhila idatha ye-Exynos 9810, iprosesa ye-Galaxy S9
I-Exynos 9810 ngoku isemthethweni: Iprosesa ye-Samsung Galaxy S9. Fumana ngakumbi malunga neprosesa entsha ye-Samsung eza kwintengiso kungekudala.
I-Lyric T6R, sivavanye i-thermostat ye-Honeywell edibeneyo
I-Lyric T6R, i-thermostat ehlakaniphile eyenziwa ngu-Honeywell kuwo wonke umntu kwaye eya kukuvumela ukuba ufumane induduzo kwaye ulondoloze ekusebenziseni amandla.
Isamsung yazisa esweni kuqala ngetekhnoloji yeQLED, egobile kunye noThunderbolt 3 unxibelelwano
Inkampani yaseKorea i-Samsung isandula ukwazisa, kwiintsuku ngaphambi kokubhiyozelwa kwe-CES, iliso lokuqala eligobile kunye netekhnoloji ye-QLED kunye nonxibelelwano lweThunderbolt 3
I-Instagram inokulimaza impilo yengqondo yolutsha
Kuthekani ukuba sifumanisa ukuba i-Instagram ichaphazela kakubi impilo yengqondo yolutsha lwethu? Yiloo nto izifundo zangoku zikhomba kuyo.
Kufunyenwe ibug enkulu yokhuseleko kwii-Intel CPUs
Kutyhilwe nje ukuba iiprosesa ze-Intel zenziwe ukusuka kwiminyaka eli-10 eyadlulayo ukuza kuthi ga ngoku zisengozini enkulu ebangela ukuba baphulukane nokusebenza kakhulu.
I-Amazon ithengise ngaphezulu kwe-5.000 yezigidi zeemveliso ngenkqubo ye-Prime ngo-2017
Abafana abavela eAmazon bakhuphe amanye amanani afunyenwe yinkampani kulo lonke u-2017 ngaphakathi nangaphandle kwenkqubo ye-PRIME
Uvavanyo lukaGoogle kwiFuchsia OS kwiincwadi zePixel
UGoogle uyaqhubeka nokusebenza kwinkqubo yakhe elandelayo eyaziwa ngokuba yiFuchsia OS. Kwaye ikhuphe amaxwebhu ukuze ikwazi ukufakwa kwiincwadi zePixel
Ukuzimela kweemoto zombane kunyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 kwiminyaka emi-6
Njengoko umxholo wale ndaba usitsho, ukuzimela kweemoto zombane kunyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 ...
Indlela yokurekhoda isikrini kwi Windows 10 PC
Namhlanje sichaza ngendlela elula yokurekhoda isikrini ngaphakathi Windows 10, ngokusebenzisa isicelo sendalo kunye nezinye izicelo zomntu wesithathu.
Uhlaziyo lweWindows luqhubeka lujonga uhlaziyo olungayeki? Ke ungayilungisa
Uhlaziyo lweWindows luhlala kumaxesha amaninzi lukhangela uhlaziyo kwaye ukuze ulisombulule ngendlela elula esikunika yona esi sifundo.
I-Russia iphulukana nesatellite ye-45 yezigidi zeerandi ngenxa "yokulinganisa"
Njengoko besitsho, ezi zinto zenzeka nakwiintsapho ezilungileyo. Ndiqinisekile umntu uthathe ...
U-Elon Musk uthumele ngempazamo inombolo yakhe yefowuni kwi-Twitter
Ke njengoko sisitsho, i-CEO yeTesla yapapasha inombolo yayo yefowuni ...
Le yimidlalo yasimahla kaJanuwari 2018 kwiPlayStation Plus
Siza kwazi ukuba yeyiphi imidlalo yasimahla kwiPlayStation Plus kaJanuwari 2018, kodwa kufuneka ndikuxelele ukuba ime ngaphezu kwazo zonke izinto zeDeux Ex.
Sihlalutya ii-headphone ze-Nix ezivela eNewSkill
Sihlalutya ii-headset ze-Nix bluetooth ze-gamers, nangona sibulela ukungafani, zinokusetyenziswa nakweyiphi na imeko
UWhatsApp uza kuyeka ukusebenza kumaqonga amabini ekupheleni konyaka
Isizathu sokumangaliswa kukuba nge-31 kaDisemba, i-WhatsApp iyayeka ukusebenza kumaqonga amabini ahambayo, ukunciphisa ukuhambelana kwawo.
Ibhetri enkulu kaTesla e-Australia ibonisa amandla ayo
Ibhetri enkulu efakwe ngu-Elon Musk e-Australia sele ibonakalisile ukusebenza kwayo ngokuqala nge-140 ms emva kokusikwa
I-Opera 50 iya kudibanisa ukhuseleko lwendalo kunye nemigodi ye-cryptocurrency
Ukuthintela abahlobo babanye abantu ekubeni basebenzise abanye abasebenzisi, iOpera iyakwazisa ngokwendalo isitshixo se-cryptocurrency kuhlobo lwayo olulandelayo
I-Hackers nayo inokuba ilungile, ngokwe-RAE
IRoyal Academy yoLwimi, isandula ukwamkela intsingiselo yesibini kubagculeli, ngoku ikwangabafana abalungileyo kwifilimu
UmRashiya usweleke ngelixa enandipha inyani yokwenyani
Unyaka we-2016 yayingunyaka apho inyani yokwenyani inyuswe ukuba ibe yinto engaphezulu ...
Ukutshaja i-smartphone yethu kwi-USB yoluntu ngumbono ombi kakhulu
Ibhetri ye-smartphone iyaqhubeka ukubakho, kwaye okwangoku iya kuqhubeka ukuba yingxaki, eya kusinyanzela ukuba ...
IMercedes kunye neqela le-Linkin Park bayasebenzisana ukwenza isandi esifanelekileyo seemoto zombane
IMercedes izakusebenzisana neqela eliliwa eliyi-Linkin Park, ukwenza isandi esifanelekileyo kwizithuthi zombane i-AMG yenkampani yaseBavaria
Uhlalutyo lwesandi senqaba yamandla eSistem iMultiroom WiFi
Fumanisa i-Energy Sistem Multiroom WiFi tower tower, imveliso enexabiso le- € 130 isinika umgangatho wesandi kunye nokusetyenziswa ngokugqibeleleyo.
U-Eric Schmidt, i-CEO yeGoogle osebenzise i-iPhone, indoda eye yalawula iinkonzo ze-intanethi kwihlabathi liphela, ngoku ishiya isikhundla sayo kwiAlfabhethi.
Sihlalutye i-27-intshi yePilips esweni (276E7QDSW) ngeGIVEAWAY
Siphonononge esweni i-27-intshi i-Philips esweni (276E7QDSW), kodwa sikuzisela iindaba ezingcono, inokuba yeyakho ngokuthatha inxaxheba kunikezelo lwethu.
I-Apple Park ngoDisemba 2017: ividiyo entsha yokujonga idrone
UMateyu Roberts uyasimangalisa kwakhona ngohambo lwedrone olukhokelwayo ngeApple Park kunye nokuba kwenzeka njani ngoDisemba 2017
Ukuqokelela irhafu kwi-bitcoin? EJapan kunokwenzeka
Into esingakhange siyicinge kukuba ngoku iyindlela yokuhlawula, kodwa kukuba sinokufumana umvuzo wethu kwi-bitcoin.
IMicrosoft isusa isikhangeli sikaGoogle kuVenkile kaMicrosoft ukuze angahlangabezani nezikhokelo
Isindululi seChannel esifumaneka kwiVenkile kaMicrosoft sivaliwe kwiVenkile kaMicrosoft, ngokwaphula izikhokelo zevenkile
Sihlalutya i-ASUS ZenBook Pro, ukusebenza kunye noyilo kuyahambelana
Kudala sivavanya i-ASUS ZenBook Pro UX550VD kwaye sikuxelela amava ethu, siza kuyicazulula ngokweenkcukacha.
I-UPS iyalela iilori zombane ezili-125 ezivela eTesla
Iindaba ezimnandi kuzo zombini iinkampani ukusukela oko uTesla enayo le odolo yokuqala enkulu yezithuthi ze ...
Ukungena kwe-Porg, uphawu lweempawu ze-Star Wars sele ine-minigame
Siza kuba nakho ukufaka i-BB-8 kwidabi elikhethekileyo lokulawula le Porg ngaphakathi kwe-Millennium Falcon.
IPanasonic kunye neToyota ziya kusebenza kunye ekwenzeni iibhetri kwiimoto zombane
Iinkampani zaseJapan, iPanasonic kunye neToyota bafikelele kwisivumelwano sokuqinisa ukwenziwa kunye noyilo lweebhetri zeemoto zombane.
UHolife uphethe ngesandla engenacingo engenanto engenantambo
Ngeli xesha besinethuba lokuvavanya igajethi entsha yekhaya, iHolife ephethe isixhobo sokucoca ngaphandle kwentambo, ...
U-Apple uza kuqala kunye nabanini zabelo kwiSteve Jobs Theatre, eApple Park
Kwaye ukuba ukumiliselwa kweemodeli ezintsha ze-iPhone 8, 8 Plus kunye ne-iPhone X bezi ...
Ngaba uyayifuna ibhetri kwiNintendo switch yakho? I-ZeroLemon izisa kuwe
Ityala leZeroLemon Battery Charge Case, inkqubo esinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezilishumi zokuzimela kwiNintendo switch yethu.
IBlackBerry KeyONE ifika ngokusemthethweni eSpain
Namhlanje iBlackBerry KeyONE ifika kwimakethi yaseSpain, kanye xa kungekho mntu uyifunayo, akukho mntu uyifunayo kwaye akukho mntu wayilindeleyo.
Sihlalutya i-Samsung MU6125 TV, i-4K kunye ne-HDR 10 kwinkonzo yomgangatho ophakathi
I-Samsung MU6125, i-TV ekumgangatho ophakathi ezisa isisombululo se-4K kunye neempawu ze-HDR 10 kuzo zonke iipokotho, masiye apho ngohlalutyo.
Ngoku ungamvimba uMark Zuckerberg kuFacebook
Ukuba ukhe walingeka ukuba uvimbe iakhawunti kaMark Zuckerberg kuFacebook, uya kuyibona indlela ongenakukwazi ngayo ubuncinci kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
I-Chrome 64 iya kukuvumela ukuba uthulise iividiyo ezidlala ngokuzenzekelayo
Inguqulelo entsha ye-Chrome 64 iya kuba nokukhetha okufunwa kakhulu ngabasebenzisi: ukuze bakwazi ukuthulisa iividiyo ezidlalwa ngokuzenzekelayo
Sihlalutya iAmazon Fire Stick TV, enye indlela enomdla ngakumbi kuneChromecast
KwiActualidad Gadget kufanele sisebenze kwaye siza kukuxelela ngamava ethu nge-Amazon Fire TV Stick Basic Edition.
Iimaphu zikaGoogle azizukuvumela ukuba utsibe indawo yakho elandelayo yokuhamba
Iimaphu zikaGoogle ze-Android zongeza umsebenzi omtsha onomdla kakhulu kwabo basebenzisa izithuthi zikawonkewonke mihla le. Okwangoku kuphela kwi-Android
I-Chrome iyakusivumela ukuba sithule ukudlala ngokuzenzekelayo kweevidiyo
Uhlaziyo olulandelayo lwe-Chrome luya kusivumela ukuba siphephe ukuveliswa ngokuzenzekelayo kwevidiyo, kwiiwebhusayithi esizifunayo.
I-NASA ibhengeza ukufunyanwa kweplanethi entsha
Ndiyabulela ekusebenziseni inkqubo yobukrelekrele bokuyila eyenziwe nguGoogle, iNASA ikwazile ukufumana iplanethi entsha kwikroza leDraco.
Sonke sisebenzisa ii-GIFs ngakumbi nangakumbi, ezi zezona zidume kakhulu ngonyaka ngokweGiphy
Alithandabuzeki elokuba ii-Gifs ziya zisetyenziswa ngakumbi ngabasebenzisi kwaye ziluncedo olukhulu ...
Landela ii-hashtag, obunye ubuhlanya obuyimpumelelo kwi-Instagram
Uyakwazi ukuba unolwazi ngomxholo obaluleke kakhulu malunga nezinto onomdla kuzo ngokulandela igama okanye iqela labo.
IJedi DLC yokugqibela iza kwiMfazwe yeNkwenkwezi yeMfazwe
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, inkampani yomdlalo wevidiyo isebenze nzima ngokwaneleyo ngeDisney ukuba ibe nazo zonke iindaba.
Ifowuni yoMsebenzi: I-WW2 ephezulu yokuthengisa umdlalo wevidiyo ngoNovemba
I-PlayStation 4 iyaqhubeka nokulawula eSpain ngoku, ngelixa i-Call of Duty: I-WW2 ifumene inani elilungileyo labalandeli kunye neFIFA ehleliyo.
I-Android Marshmallow kunye neNougat zilawula kwizixhobo ze-Android
Sijongene nophuculo olucacileyo ngokwemiqathango yokwahlulwa kweenguqulelo ezahlukeneyo zenkqubo yokusebenza esetyenziswa kwi ...
I-Apple iqinisekisa ukufunyanwa kweShazam, ukuvalelisa okukhulu
Inkampani yaseCupertino izimisele ukuthenga uShazam ngenani leenkwenkwezi, nangona ingekho nkulu njengoko bekucingwa ngaphambili.
I-Apple inokuthi iguqule iibhetri zenze mandundu ukusebenza kwazo
Rumor yamva nje malunga nokusebenza okuphuculweyo ngokutshintsha kwebhetri kuyavela kwiReddit, ngokucacileyo iApple inyanzela ukusebenza gwenxa.
IXiaomi Mi A1 inqabile kodwa sele iqala ukufumana i-Android 8.0 Oreo
Kubonakala kungaqhelekanga nokuba isixhobo ekunzima ukusifumana sele silungiselele okanye sele sifumana uhlaziyo lwe ...
Ezi zezona vidiyo zidumileyo kwi-YouTube ye-2017
Ke masibone ukuba zeziphi iividiyo ezaziwa kakhulu kwi-YouTube ngexesha lika-2017 eSpain nakwilizwe liphela.
Ubukho beebhaktiriya ezithile esiswini sakho kunokubangela ukuba unciphise umzimba ngokukhawuleza
Olu phononongo lutsha lwenziwe eDenmark lubonisa ukuba kunokwenzeka ukuba wazi ukuba yeyiphi indlela yokutya oya kuhamba ngayo kuxhomekeke kwintsholongwane emzimbeni wakho.
Wazi njani ukuba zingaphi iiyure omamele umculo kwiSpotify ngo-2017
Fumana nathi ukuba zingaphi iiyure omamele umculo kwiSpotify ngonyaka ka-2017 ngamanyathelo ambalwa alula.
UApple angabhengeza ukuthengwa kweShazam namhlanje
Ngokwenani elikhulu lamahemuhemu, namhlanje ukuthengwa kwenkonzo yokwazisa umculo uShazam nguApple kungabhengezwa
Ngo-2018 ungatshintsha i-nick yakho kwi-PlayStation Network
AbakwaSony babhengeza ukuba nge-2018 elandelayo uya kuba nakho ukutshintsha igama lakho kwinethiwekhi ye-PlayStation, lixesha lokuba uqale uyilo.
Ubukrelekrele bokwenziwa buze kwi-Photoshop ukususa imvelaphi kwiifoto
Ngombulelo kubukrelekrele bokuzenzela, inguqulelo elandelayo ye-Photoshop iya kusivumela ukuba sidubule imvelaphi yento ephambili ngendlela elula kakhulu.
I-Bixby sele isisiSpanish, kodwa i-United States kuphela
Kwaye ukuba umncedisi we-Samsung ubonakala efumana iibhetri ngokweelwimi, kwaye ...
Konwabele ukulinda de kufike uSanta Claus ngo «Landela uSanta»
Omnye unyaka omtsha, enkosi kuGoogle, singenza iintsuku ezikhokelela kuKhisimusi ukuba zibe mnandi kwaye zibe mnandi.
Ezi zii-emoji ezintsha zango-2018 kwaye ezinye zinokhetho lokuzijikeleza
Asithandabuzi ukuba i-emoji izakuqhubeka nokuphucula kwiinguqulelo ezizayo kunye nohlaziyo njengoko bebesenza ...
IPixelmator Pro, enye indlela yeFotohop yabasebenzisi beMac, ihlasela imarike
Inguqulelo yobungcali yePixelmator Pro iba yinto engaphezulu kokufanelekileyo kubo bonke abo basebenzisi beFotohop.
I-Android 8.1 Oreo sele isemthethweni, sikubonisa zonke iindaba
Sele sinalo uhlaziyo oluphambili lwenkqubo yokusebenza ye-Android 8 Oreo, kule meko yinguqulelo ...
I-AquaWeb, indlela entsha yokufumana amanzi ngokusekwe kwindalo
I-AquaWeb yinkqubo entsha equlunqwe ziingcali ezikwaziyo ukufumana amanzi ngokwendalo kwimvula kunye nokufuma kubume bendalo.
IWindows ifuna eyayo i-AirDrop phakathi kwe-iOS kunye neePC
Kuthekani ukuba uMicrosoft ukhuphe usetyenziso? Basebenza kuloo nto eRedmond, kwaye yiyo loo nto iWindows inokuba ne-AirDrop yayo.
ILyric C1 WiFi evela eHoneywell, ukhuseleko kunye noku-odola ngexabiso elifanelekileyo [Uhlalutyo]
Sikuzisa uhlalutyo lomnye weemveliso zalo ezenza ikhaya lakho libe yindawo ekhuselekileyo nenobukrelekrele, ikhamera yeLyric C1 enonxibelelwano lweWiFi.
Ukuba semngciphekweni kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra kunika ukufikelela kumlawuli kwi-Mac.Sikubonisa isisombululo sethutyana
Umngcipheko wokugqibela omkhulu ochaphazela inkqubo yokusebenza ufunyenwe kwi-MacOS High Sierra kwaye ichaphazela ii-Apple Macs.
Igumbi lokubaleka leAudi liya eMadrid ukukhuthaza iteknoloji yezithuthi zombane
Ukuba usibuza ngemoto yombane, kunokwenzeka ukuba uTesla uza kuqala engqondweni, ...
I-Imgur yaqhekezwa ngo-2014 kwaye bafumanisa ukuphela kuka-2017
I-Imgur, i-portal eyaziwayo yomfanekiso, yahlaselwa ngohlaselo kwiminyaka eyadlulayo. Kwiminyaka kamva iyaqonda kwaye ilumkise abasebenzisi bayo
Uwajonga njani amabali e-Instagram ngokungaziwayo
Ngaba uyafuna ukungabonakali ngokupheleleyo kwi-Instagram Stories? Ewe sele kukho isisombululo sayo. Kwaye siza kukuxelela apha ngezantsi
IAmazon ikhangela abasasazi eSpain nge-14 euros ngeyure, ubeke ezinye
Umsebenzi wamva nje weAmazon unqabile, uya kukuhlawula ngexabiso le-14 ngeyure ukuba usasaza iiphakheji zayo ... iqhinga okanye unyango?
I-Aukey LC-C1, Qi ukuhlawulisa ngokukhawuleza kubo bonke abaphulaphuli [Banike]
Ngeli xesha siza kuhlalutya i-Aukey LC-C1, itshaja engenazingcingo ye-Qi etshaja ngokukhawuleza engayi kuqatshelwa mntu.
Siphonononge i-H501, 233621 isandi sokurhoxisa iseti yentloko
Siya apho kunye nohlalutyo olunzulu kwi-H501, ii-headphone zaseTshayina ezithembisa ukucinywa kwesandi ngexabiso elifanelekileyo.
Unyaka ka-2009: I-Twitter yayibalulekile ngokwaneleyo ukuba ibe nezixhobo ezizinikeleyo
U-2009 ube yimpumelelo epheleleyo ku-Twitter: iinkampani zide zadala izixhobo ezizodwa zokulawula inethiwekhi yoluntu kwintendelezo yesandla sabo
Itraki yombane kaTesla iyakubiza kancinci kuneNdlela yayo entsha
Ngethuba lokunikezelwa kwetraki yeTesla, idatha yexabiso ayiboniswanga. Ngoku sinokuqinisekisa ixabiso leenguqulelo ezimbini eziza kuthengiswa
UXiaomi uza kuthengisa ii-smartphones ezingama-50 nge-1 euro ngeLwesihlanu wokuqala omnyama eSpain
Iindaba ezisandula ukufika kuthi ezivela kuXiaomi malunga neLwesihlanu omnyama wokuqala eSpain. Ke kwaye…
I-Samsung Galaxy S9 inokuboniswa ngexesha le-CES 2018
Isamsung inokuqhubela phambili ukubonakaliswa kwe-Samsung Galaxy S9 yayo ukuya kwinyanga kaJanuwari. Ukucacisa ngakumbi, injongo kukuyibonisa kwi-CES 2018
UGoogle uyazi apho ukhoyo, nokuba unayo indawo enikwe amandla
UGoogle uqinisekisile kutsha nje ukuba ayikhathali nokuba unayo indawo oyenzileyo okanye hayi, iyazi ukuba uphi ngalo lonke ixesha.
IHawaii neBelgium emfazweni ngokuchasene neebhokisi zemivuzo kwimidlalo yevidiyo
Yiyo le ndlela yomthetho eqala ngayo ukuba olu hlobo lokuphanga olubangela impikiswano engaka luya kuqala ukulawulwa.
U-Uber uyavuma ukuba basokola kakhulu ngokuchaphazela abasebenzisi abazizigidi ezingama-57
U-Uber uqinisekisile nje ngokusemthethweni ukuba iiakhawunti zabasebenzisi abazizigidi ezingama-57 zagqogqwa ngo-Okthobha ophelileyo ...
Fumana olona khetho lufanelekileyo lokufaka i-Android kwiPC yakho. Siza kukubonisa olona khetho kunye neemulators zokonwabela i-Android kwikhompyuter yakho
I-Disney Pstrong ikhupha ngokusesikweni 'i-Incredibles 2' Teaser
Eli hlobo lonyaka eliza kuthi "I-Incredibles" liza kukhutshwa kwimidlalo yeqonga, ngumdlalo bhanyabhanya i-Incredibles 2….
IXESHA sele inayo izixhobo ezilishumi ezilungileyo zika-2017
Siza kwazi kancinci ngokunzulu ukuba zeziphi ezona zixhobo zibalaseleyo ze2017 ebezikwimagazini yeXESHA ngaphandle kweengxoxo.
Fumana i-Devolo 1200+, eyona PLC intle kwintengiso kule raffle
Siyavuya ukukuxelela ukuba ungayifumana enye yezi mveliso zingasimahla. Ngena kwaye ufumanise njani.
Yenza uninzi lwezivumelwano zoMnyama ngoLwesihlanu ngaphandle kokulahlekiswa
Ukuba ufuna ukuthatha ithuba laso nasiphi na isipho esinomdla ngexesha langoLwesihlanu oMnyama, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye zeengcebiso ukuze zingakhohlisi.
Isizukulwana sesibini seTesla Roadster, ngo-0 ukuya ku-100 ngaphantsi kwemizuzwana emi-2
Isizukulwana sesibini seTesla Roadster ngoku sisemthethweni. Le moto intsha yemidlalo yombane isuka kwi-0 iye kwi-2 ngaphantsi kwemizuzwana emi-XNUMX
I-Tesla Semi, yile lori yombane ka-Elon Musk
I-Tesla Semi yilori yokuqala yombane ye-American Tesla. Sichaza yonke into oyifunayo malunga nelori elandelayo yexesha elizayo
Uloliwe wexesha elizayo uza kuba nendawo yokuzivocavoca, igumbi lomdlalo wevidiyo kunye nendawo yokusebenza
I-Ideenzug yiprojekthi yenkampani kaloliwe yaseJamani iDeutsche Bahn, eyona inkulu elizweni. Uloliwe wexesha elizayo usakhangelwa
Sihlalutya isithethi se-CSR, yenye yeepremiyamu ze-AUKEY
Makhe sijonge ngakumbi kwisithethi se-CSR esisinikwa ngu-Aukey.
UCristóbal, ingelosi yakho ekugcinayo kwivili. Olu luhlobo olutsha lwe-SEAT
Ihlabathi leemoto liqhubeka linxulunyaniswa naleyo yetekhnoloji kwaye kule meko umphathi ...
I-YouTube izakuvumela ukuba uthenge amatikiti eekonsathi
I-YouTube ityikitye intsebenziswano neqonga leThikimatikiti. Ukusukela ngoku kuya kubakho ukuthenga amatikiti ekhonsathi kwinkonzo yokusasaza
Umsebenzi wasekhaya lishishini lomntu wonke kwaye iSamsung iyayikhumbula #YaNoHayExcusas
Kule mihla kubonakala ngathi "kubi" ukuba kufuneka uthethe ngokwahlulahlula imisebenzi yasekhaya phakathi kwabantu kwaye ...
Sele sijikeleze ikona ukusuka ngoLwesihlanu oMnyama, iAmazon ihlala iqala ukufudumeza iinjini, yiyo loo nto ...
Siza kukunika ukhenketho oluncinci lweyona mveliso intle onokuyifumana kwizibonelelo zanamhlanje zeGeekbuying ngamaxabiso angenakubethwa.
IFirefox Quantum iza kukwenza ushiye ezinye iibrawuza zakho
IFirefox Quantum lolona hlobo lunamandla lwesikhangeli seMozilla. Iyakhawuleza, isebenzisa i-RAM encinci kune-Chrome, kwaye ine-UI entsha
Iqela leAlibaba laphula irekhodi lokuthengisa ngosuku olunye nge-11/11
NgoMgqibelo umhla we-11 we-11 uSuku oluDumileyo lwee-Singles lubhiyozelwa e-China, nakwiinkampani ezininzi ezinkulu ...
Ezi ziziphelo ezihambelana noHarry Potter: iiWebhu ziyadibana
Olu luluhlu lweefowuni eziya kuthi zihambelane noHarry Potter: Amagcisa aManyene, iPokémon Go entsha esekwe kwimeko yeHarry Potter.
Phakamisa isikrini sakho seLaptop ukuze unakekele umqolo wakho nentamo
Funda nathi indlela yokuphucula indlela omi ngayo kunye nempilo yakho ngokusebenza kunye nelaptop kunye nokujonga esisekondari.
I-ID yobuso yoyisiwe yimaski
Inkampani yaseVienamite iBkav ikwazile ukugqitha kukhuseleko lwe-ID yobuso kwi-iPhone X ngenxa yokusebenzisa imaski eprintwe ngetekhnoloji ye-3D
I-SPC Smartee Sport, sivavanye le ndleko iphantsi, yokusebenza okuphezulu
Hlala nathi kwaye ujonge ngokunzulu kwi-SPC Smartee Sport, iswatchwatch ejika iintloko.
UXiaomi akayeki kwaye ulungiselela ukuvulwa malunga neevenkile ezili-10 eSpain
Kwaye kutsha nje ukuba siqinisekise iindaba malunga nokufika ngokusemthethweni kweXiaomi eSpain kunye ...
Ividiyo emfutshane yenethiwekhi yentlalo yoMculo.ly utshintsha abanini be- $ 1.000 yezigidigidi
Inethiwekhi yokunxibelelana yeevidiyo ezinomculo ukuya kuthi ga kwimizuzwana eli-15 ubude kulutsha zisandula kuthengwa nge-1.000 lezigidi zeedola.
I-Disney ithembisa ukuba iqonga layo liya kubiza kancinci kuneNetflix
Namhlanje i-CEO yangoku ikwazisile ngeendaba nje ezibalulekileyo, iqonga lomxholo elifunwayo liya kuba litshiphu kuneNetflix.
I-YouTube kwi-warpath yokwenza iYouTube Kids indawo ekhuselekileyo
Le yindlela iYouTube ethathe ngayo isigqibo sokuma kumxholo ophazamisayo ngaphakathi kuYouTube Kids, usenza iqonga libe yindawo ekhuselekileyo.
I-OnePlus 5T iyavezwa kwezi ndawo zivuzayo
Iiyunithi zokuqala ze-OnePlus 5T sele zibonakala kwi-Twitter nakwiReddit, masiqwalasele amanqaku kunye noyilo
I-Facebook iveza iNgingqi, usetyenziso lweziganeko zayo ezintsha
Isikwere kunye neTripAdvisor zizicelo ezisincedileyo ixesha elide ukulawula ukuzonwabisa kwethu xa ...
Izazinzulu kunye nabaphandi abavela kwi-NASA kunye noLawulo lweSizwe lwe-Oceanic kunye neAtmospheric Administration babhengeza ukuba umngxunya okwi-ozone layer uyavala.
I-2018 ingangunyaka wokugqibela we-Barcelona ukusingatha i-MWC
Umbutho we-MWC, i-GSMA, ukhathazekile kukungazinzi kwezopolitiko e-Barcelona kwezi nyanga zidlulileyo kwaye ucinga ukushiya i-Barcelona njengekomkhulu
Umxube weXiaomi Mi olandelayo kunye "nenotshi" ye-iPhone X?
Kwaye yile nto bayibiza ngokuba yi-Apple yaseTshayina. Kukho amarhe athile ajikeleze inethiwekhi asasazekileyo ...
IVespa Elettrica, imodeli yase-Italiya ngaphandle kwepetroli iyenzeka
UPiaggio ekugqibeleni uza kusungula imodeli yentsomi epheleleyo yombane iVespa kunyaka olandelayo 2018. Igama layo ngu «Vespa Elettrica» kunye nokuzimela kwayo kunomdla
ILamborghini Terzo Millennio, isupercar yombane enetekhnoloji yexesha elizayo
ILamborghini iyazisa ngemoto yayo elandelayo. Le yeyona supercar yombane ilamborghini Terzo Millennio
Umncedisi kaGoogle ngoku uchonga iingoma njengoShazam
Ngoku uMncedisi kaGoogle uqinisekisile ukuba uya kuba nakho ukuchonga ngokukhawuleza iingoma ngokumamela nje.
Ethereum Yintoni kwaye uyithenga njani i-Ethers?
Yonke into malunga ne-Ethereum kunye ne-Ethers, iqonga elitsha kunye nokhuphiswano lwe-cryptocurrency ye-Bitcoin. Fumanisa ukuba kuphi kwaye njani ukuthenga i-Ethers ngokuzithemba kunye nesiqinisekiso.
I-NichePhone-S ifowuni yefowuni ye-Android
I-NichePhone-S, ifowuni ye-Android eyothusayo ngobungakanani bayo obuncinci, masiyazi ngokusondeleyo.
Kusemthethweni, uXiaomi ufika eSpain kunye neemveliso ezinomdla kakhulu kunye namaxabiso
Emva kwamarhe amaninzi ekugqibeleni yenziwe yaseburhulumenteni, uXiaomi ufika eSpain enevenkile ezimbini ezintsha zomzimba kunye neemveliso ezininzi ngamaxabiso asezantsi.
I-Bitcoin, yintoni, isebenza njani kwaye ungathenga phi iBitcoins
Yonke into malunga neBitcoin. Yintoni le, imbali, indlela yokuthenga iBitcoins, izibonelelo zayo kunye nobuthathaka beyona cryptocurrency idumileyo.
Ngaba iApple yobuso be-ID umahluko phakathi kwamawele amawele? Mhlawumbi akunjalo
U-Apple wasithembisa kumboniso ukuba i-ID yobuso yayichanekile kangangokuba yayiza kukwazi ukwahlula phakathi kwamawele, kodwa kubonakala ngathi akunjalo.
Ngale cap, iFord ifuna ukuthintela iilori ukuba zingalali ivili
Icandelo lezothutho ezindleleni lelona libaluleke kakhulu kulo naliphi na ilizwe, kwaye ukuba akunjalo sinayo kuphela ...
IONITY, uthungelwano lweetshaja ezinkulu ezifuna ukwandisa kulo lonke elaseYurophu
IONITY ifuna ukuxhobisa iYurophu ngezitishi ezingama-400 zeetshaja ezinkulu zeemoto zombane. Ibaleka njengomntu okhuphisana naye ophambili
I-Opel ithengisa iimoto ngeAmazon Spain
I-Opel ibeka iiyunithi zokuqala ezingama-20 zeGrandland X SUV yayo ithengiswa ngeAmazon Spain. Intengiso iyakhawuleza kwaye iyahambelana nokubhukisha kwangaphambili
I-WhatsApp ayikusebenzeli? Ayinguwe wedwa, i-WhatsApp iphantsi
Ngexesha leshumi elinanye unyaka wonke, iqonga lemiyalezo yeWhatsApp liyekile ukusebenza okwethutyana, ishiya izigidi zabasebenzisi incommunicado
I-Tesla ngeeyure eziphantsi, kunye nelahleko yezigidi kwaye ngenxa yeTesla Model 3 yayo
I-Tesla inengxaki kwimodeli yayo ebaluleke kakhulu: Imodeli yeTesla 3. Imihla ebekiweyo ayifikelelwa kwaye izigidi zeedola zilahleko ziyarekhodwa.
Abahleli beefoto ezikwi-Intanethi
Ukuba sifuna ukuhlela iifoto zethu, sinokufumana iinkonzo ezininzi kwi-Intanethi. Sikubonisa ukuba ngubani owona mhleli weefoto kwi-Intanethi.
Ezi ziinkulumbuso zokuqala zeNetflix ngoNovemba 2017
Sikuzisa uluhlu oluchanekileyo oya kuthi ngalo ukwazi ukufumana ukuba yeyiphi imixholo esiziswa yiNetflix eSpain ngenyanga kaNovemba 2017.
I-Acumos, kuba uMthombo oVulekileyo wobukrelekrele bokubakho bunokwenzeka
Ukungena apho siza kuthetha ngeAcumos, inkqubo entsha yoVavanyo loVavanyo oluVulekileyo olwenziwe yiLinux Foundation.
Umsebenzi we-Microsoft ufake i-Chrome embindini wentetho kuba u-Edge wayekile ukusebenza
Kubonakala ngathi iMicrosoft inesicwangciso B xa iMicrosoft Edge iyeka ukusebenza kwintetho: faka iGoogle Chrome
Sika iividiyo ezikwi-Intanethi
Ngaphambi kokwabelana ngeevidiyo, kuya kufuneka uzinqumle ukuzenza zincinci. Sikubonisa ezona nkonzo zibalaseleyo ukusika iividiyo kwi-intanethi
IDaimler E-Fuso Vision One, ilori yokuqala yombane ilapha
Umbono wokuqala weFuso-E lelori yokuqala yombane kaDaimler. Ukuzimela kwayo ziikhilomitha ezingama-350 kwaye inokuhambisa iitoni ezili-11
IMicrosoft Andromeda, inkampani iya kusebenza kwincwadana yokubhala yedijithali
IMicrosoft Andromeda yenye yeeprojekthi inkampani esebenza eRedmond. Iya kuba kukuphinda ungene kwakhona kwincwadi yamanqaku yedijithali
USofia, irobhothi ye-AI esongele ukutshabalalisa umhlaba, ifumana ubumi baseSaudi Arabia
USofia, uye waba yirobhothi yokuqala ehlabathini ukufumana ubumi eSaudi Arabia.
Ngoku i-WhatsApp ikuvumela ukuba ucime imiyalezo ethunyelweyo
Inketho ekudala ilindelwe esivumela ukuba sicime imiyalezo ethunyelwe nge-WhatsApp ngoku iyafumaneka kwaye iyasebenza.
I-Honda yazisa iRoboCas, ifriji eneziqu zayo enembonakalo yobuhlobo
IHonda RoboCas sisiseko esizimeleyo esisebenza ngombane esincinci esinokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo.
I-Google ihamba ngenqanawa yePixel 2 iyunithi kumthengi
Eli yunithi yeGoogle Pixel 2 esithethe ngayo ayiludlulisanga ulawulo lwangaphakathi lwenkampani, kwaye isathunyelwa.
I-Opel ayiniki ngokwaneleyo ekwenziweni kombane wayo, i-Ampera-e
I-Opel kuye kwafuneka ikhubaze ukuthengiswa kwe-Ampera-e yayo yombane eNorway ngenxa yemfuno enkulu yokuba ayinakho ukuxhasa.
UXiaomi uqinisekisa ngokusesikweni ukufika kwakhe eSpain
Isigebenga saseAsia uXiaomi uqinisekisile nje nge-Twitter ukuba kungekudala uza kuvula ivenkile ebonakalayo eMadrid apho aya kuthengisa khona iimveliso zayo ngokuthe ngqo
Le yimihla yokunikezelwa kweSteam evuzayo
Imihla elandelayo yokuthengisa ye-Steam yentsalela ka-2017 iye yavuza, ngaba uyafuna ukuyazi? Sikuzisa kuwe njengesiqhelo kwizixhobo zeActualidad.
Bantwana kunye newatchwatch, indibaniselwano ekhuselekileyo?
Kubonakala ngathi ukhuseleko lwabantwana alonyukanga kangako xa kuziwa ekubandakanyeni izixhobo ezinobuchule koonodoli babo abancinci.
IGigabyte Aorus X9, ilaptop yokwenene yokudlala
Kukho indawo ebalulekileyo yabasebenzisi abafuna ilaptop yokudlala ngeemfuno zokuhamba ezahlukeneyo, uGigabyte ubanika iAorus X9.
I-Facebook Messenger ngoku ikuvumela ukuba uthumele imali nge-PayPal
Ngoku unokwabelana ngokulula ngemali kunye nomhlobo we-Facebook ngokusebenzisa i-Messenger application efumanekayo kuye nawuphi na umsebenzisi.
Eyona antivirus yasimahla
Ukuba ujonga iantivirus yasimahla, kweli nqaku ndiza kukubonisa ukuba zeziphi ezona antivirus zisimahla kwimarike.
Isamsung yazisa ngeBixby 2.0, isizukulwana sesibini somncedisi esijolise kwizixhobo ezifanelekileyo
Inkampani yaseKorea ithathe indawo yokutsiba nge-Bixby isungula isizukulwana sesibini sokulawula izixhobo ezifanelekileyo ekhayeni lethu.
Inguqulelo yewebhu yeKhalenda kaGoogle ivuselelwe kuyilo olutsha
UGoogle ekugqibeleni uye wahlaziya uyilo lweKhalenda kaGoogle kuhlobo lwayo lwewebhu ukuyilungelelanisa noYilo lweZinto
Ifemu yokudlala iRazer ibhengeza ukubheja kwayo kwe2017, ilaptop yeRazer Blade Stealth 2017 kunye neRazer Core V2 yangaphandle ye-GPU
I-La Caixa kunye ne-ImaginBank abathengi banokusebenzisa amakhadi abo etyala kunye ne-debit ngenkonzo ye-Apple Pay ukusukela namhlanje
I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro ifika: Ixabiso kunye neempawu
I-Huawei Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro, ungaphoswa leli nqaku esiza kukuxelela lona ngexabiso, iinkcukacha kunye nokuba uza kuba nakho nini ukuzithenga.
Iingcebiso zokufumana okuninzi kwiprinta yakho
Ngubani ongakhange asilele umshicileli mzuzu ungafanelekanga? Sikuzisa amaqhinga afanelekileyo okufumana okuninzi kwiprinta yakho kwaye ungakuvumeli.
Uphengululo lweprojektha ye-GP90, efikelelekayo kwaye inomdla kakhulu
Uhlalutyo lweprojekthi ye-GP90: fumana yonke into enokwenziwa yiprojektha efana ne-GP90, imodeli efikelelekayo kwaye ngaphezu kwako konke okunomdla kakhulu ukuqala ngayo.
IMicrosoft Edge yenza inkulumbuso yayo esemthethweni kuGoogle Play
IMicrosoft Edge ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kuGoogle Play ngendlela esemthethweni, nangona ikwinguqulelo ye-beta.
Le khamera entsha yeCasio iphefumlelwe sisixhobo se Iron Iron
Inkampani yaseJapan i-Casio iya kuzisa ngo-Okthobha 27, isizukulwana esitsha se-GZE-1, eyona khamera inqabileyo kwizenzo zesenzo
IBMW Hybrid esebenzayo, 'ibhayisekile' entsha yenkampani yaseJamani
Inkampani ye-BMW isungule ibhayisikile entsha ngoncedo lokunyusa ukuhombisa: i-BMW Active Hybrid. Inokuzimela okuhle kakhulu kunye nezinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni
Uhlalutyo lweZhiyun Smooth-Q, i-gimbal yee-smartphones kunye neekhamera zemidlalo
Kule mihla nayiphi na i-Smartphone okanye iThebhulethi yenqanaba eliphakathi iyakwazi ukufaka iifoto kunye neevidiyo zomgangatho ...
Iividiyo ezingama-360º kwiselfowuni, yonke into ekufuneka uyazi ngayo
Sifuna ukwazi okungaphaya ngokunzulu malunga neevidiyo ezingama-360º malunga nokuba ungafumana njani okuninzi kuzo kwifowuni yakho.
Sihlalutya iJaybird X3, ezemidlalo eziphezulu ze-bluetooth ze-headphone
Uhlalutyo olunzulu lweJaybird X3, ii-headphone ezenzelwe ukukwenza ukonwabele isandi kunye nemidlalo ngokulinganayo.
I-Bitcoin idlula kwaye ihlala ngaphezulu kwe- $ 5000
Kwakhona, iBitcoin isibonisa ukuba ukuthandwa kwayo akuyeki ukukhula, kudlula kwi-5.000, XNUMX yeedola
Uhlobo lweOasis, 'iReader' entsha enescreen kunye namanzi
IAmazon iye yazisa abafundi bayo beencwadi ezinkulu ngeyona ndlela: i-Kindle Oasis. Le modeli ibonelela ngescreen esikhulu kunye nokumelana namanzi
I-Twitter iya kongeza 'Gcina okwamva'
I-Twitter iza kuphehlelela inqaku elitsha kwinethiwekhi yoluntu kungekudala. Imalunga nokukwazi ukugcina ii-tweets zokufunda kamva
Ungayicinezela njani iPDF ukuze uthathe indawo encinci
Xa kuziwa ekucinezeleni iifayile kwifomathi yePDF sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo, ezinye zihlawulwe kwaye ezinye zisimahla. Sikubonisa ukhetho olungcono.
Ukongezwa okungeyonyani okubizwa ngokuba yiAdblock Plus yeChannel kubetha kwiVenkile yeWebhu yeWebhu
Ulwandiso olutsha phantsi kwegama Adblock Plus lufikile kwivenkile eyandisiweyo yeChannel, ulwandiso olungeyoyokuqala
I-OnePlus iqokelela idatha ethile kubasebenzisi ngaphandle kwemvume yabo
Isazinzulu sekhompyuter sifumanisa ukuba i-OnePlus iqokelela kwaye ihambisa idatha kunye nolwazi lwangasese lwabasebenzisi bayo kunye neetheminali zabo
Isamsung isungula irobhothi yokucoca into efanayo neDarth Vader
Isamsung ijolise kwi-Star Wars phenon, kangangokuba iphehlelele iimodeli ezimbini zokucoca iirobhothi ezimele abalinganiswa abavela kwi-saga ye-Star Wars.
Ukuhlaziywa kweTelegram kwaye ikuvumela ukuba wabelane ngendawo yakho ngexesha lokwenyani
NgeTelegram ngoku unokwabelana ngendawo yakho ngexesha lokwenyani kunye nabahlobo bakho, omnye wemisebenzi emitsha eyenza iTelegram ibe yenye indawo kuWhatsApp.
Ukongezwa kwepasswordword yeMicrosoft Edge ngoku iyafumaneka
Kunyaka omnye emva kokubhengezwa kwayo, ulwandiso lwegama le-1Password yeMicrosoft Edge ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa.
Yiyo le nto i-WhatsApp yoShishino eya kusebenza ngayo, esele iqale iimvavanyo zayo zokuqala eSpain
Ishishini likaWhatsApp sele iyinyani evavanywa eSpain kwaye namhlanje sikuxelela zonke iinkcukacha malunga nale nguqulo yesicelo.
I-CAT S31 entsha kunye nee-smartphones ze-S41, ezona fowuni zinzima kubasebenzisi abafuna ngenkani
I-CAT iveza iindaba zamva nje zeefowuni ezinganyangekiyo, i-CAT S31 kunye ne-S41, iifowuni ezinganyangekiyo ngabantu abafuna ngenkani.
I-beta 2 ye-iOS 11.1 ifika ilayishwe nge-emojis entsha kunye neyonwabisayo
I-beta 2 ye-iOS 11.1 izakufika ilayishwe ziindaba, ukulungiswa kwe-bug kunye ne-emojis, esicinga ukuba nayo iya kufikelela kuhlobo lokugqibela.
Fumana kwakhona iphasiwedi ye-Gmail
Sichaza indlela yokufumana kwakhona iphasiwedi ye-Gmail ukuba awuyikhumbuli okanye awunakho ukufikelela kwi-imeyile yakho kaGoogle. Sikufundisa ukuba uyitshintshe
IAmazon ifuna ukuba uthenge amayeza akho
IAmazon iya kuthathela ingqalelo ngokungathí sina ukungena kwishishini lekhemesti ukuze ibonelele ngamayeza amayeza kwi-Intanethi
Eyona mfihlo igcinwe kakuhle ngaphakathi kweXbox One X ityhiliwe
Makhe sibone ukuba yintoni le iqanda lephasika elifihlwe yinkampani yeMicrosoft kwiXbox One X, inento yokwenza nokwazana okudala kweMicrosoft.
I-Airbus yokuvavanya iteksi yayo yesiXeko iAirbus kwi-2018
I-Airbus inenjongo yokuvavanya iteksi yayo ebhabha kunyaka olandelayo. Iimvavanyo zokuqala zeCityAirbus zigqitywe ngempumelelo
Ezi ziinkulumbuso zeNetflix, i-HBO kunye neMovistar + ngo-Okthobha
Le nyanga ka-Okthobha iza nezinto ezinomdla kakhulu kwiNetflix nakwamanye amaqonga okuhlalutya, anjengeMovistar + kunye neHBO Spain.
Imigodi ye-idijithali yemali, fumana indlela yokwenza imigodi yemali kwilifu
Ngaba uyafuna ukwenza imali ngokumba iBitcoins? Ngoku kulula enkosi kwimigodi ye-cryptocurrency kwilifu. Fumanisa ukuba ungayenza njani iBitcoin ngenzuzo.
Ungazicima njani zonke iiakhawunti zakho ze-imeyile
Sikuxelela ukuba uzicima njani zonke iiakhawunti zakho ze-imeyile ngokweenkcukacha, nokuba ziyiGmail, Yahoo okanye Hotmail
Sihlalutya iWiko UPulse, iselfowuni enekhamera elungileyo kunye nexabiso eliphezulu
Sihlalutya iWiko UPulse, i-smartphone ene-Android evela kwinkampani yaseFrance enikezela enye yeekhamera ezilungileyo kuluhlu lwayo
I-HP Specter 13 kunye ne-HP Specter x360, iilaptops eziphezulu eziphezulu ezinokubhitya okungathethekiyo
I-North America HP isungule ii-ultrabooks ezintsha: i-HP Specter 13 kunye ne-HP Specter x360, eyokugqibela inguquko eguqukayo
Abadlali bomculo abaphambili beWindows
Fumanisa abona badlali bomculo balishumi elinanye be Windows 11. Nguwuphi oyena mdlali ubalaseleyo ukumamela iingoma ozithandayo? Yifumanise apha!
Ukuqhekeka kwe-Yahoo kuchaphazele zonke iiakhawunti zabo zomsebenzisi
I-Verizon iqinisekisa kwingxelo yokuba i-Yahoo's 2013 hack empeleni ichaphazele zonke iiakhawunti zomsebenzisi ezibhiliyoni ezi-3.000
Sihlalutya esona sitshiphu sinexabiso eliphantsi kwikhaya lakho, eHomgeek
Olunye usuku lohlalutyo kwiActualidad Gadget, sikuzisa enye indlela eya eHomgeek's Roomba, esona sitshiphu sincinci sokucoca irobhothi kwintengiso.
Amabali e-Instagram ongeze ukubanakho kokwenza uphando
Amabali e-Instagram ongeza umsebenzi omtsha wokunyusa ukuthatha inxaxheba kwabalandeli: iivoti zinokubekwa
I-PlayStation 4 isungula i-firmware yayo 5.0 inezinto ezininzi ezintsha
Njengamaxesha onke, sizisa iindaba kwaye siza kukuxelela ukuba zeziphi iindaba eziza nale nguqulelo intsha yeFlashStation 4 firmware.
Sihlalutya i-S-Box, ileyibheli emhlophe yeBhokisi yeTV kunye nokusebenza kakuhle
Sihlalutya i-S-BOX, ibhokisi emhlophe yeleyibhile ye-Android eya kuthi ikwazi ukukuvumela ukuba usebenzise umxholo kuyo yonke indawo, masiye apho.
Yintoni iGoogle Scholar kunye nendlela yokuyisebenzisa
Ukuba awusebenzisi uGqirha kuGoogle, siza kukubonisa ukuba yintoni, isebenza njani kwaye isetyenziselwa ntoni le nkonzo kaGoogle
I-Facebook ifuna ukusebenzisa ukubonwa kobuso ukufumana iakhawunti: Sala kakuhle kwimfihlo yethu ngokupheleleyo
Ekumiselweni kwe-iPhone X entsha kunye nenkqubo yokuqaphela ubuso ukuvula isixhobo, ...
Iibhokisi ezintlanu zeTV ezine-Android kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali
Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba zeziphi ezizezona zibiza ixabiso eliphantsi kwiTV yeTV yeTV yakho, ukuziqhelanisa neemfuno zakho.
Eminye yeeNcwadana Zam
Iibhukumaki zam yeyona nkonzo ibalaseleyo yeziphumo, kodwa namhlanje sifuna ukukunika iindlela ezininzi ezinomdla.
Le wayini ayinakubangela intloko okanye ibangele ukungathandeki ngelixa uyitya
Abaphandi baseSpain bayakwazi ukwenza iwayini ngaphandle kwehomoni ye-histamine, oyena nobangela wokugula kunye neentloko xa besitya.
Ukuhanjiswa okulula kweLinux
Fumanisa ezona 10 zisasazekayo zokuhanjiswa kweLinux kwiikhompyuter ezineminyaka embalwa ngasemva kwazo kwaye zingenazo izixhobo ezininzi
Sihlalutya i-iPhone 8 Plus entsha ngokweenkcukacha
Uhlalutyo lwe-iPhone 8 Plus apho sijonga khona zonke iindaba zesiphelo sendlela ngokubhekisele kwi-iPhone 7. Yahluke njani kwi-iPhone X? Fumanisa
I-Metal Gear V kunye ne-Amnesia Collection ziyidlala kwiPS Plus ngo-Okthobha
Olunye unikezelo lomdlalo wevidiyo omkhulu weveki nganye ufumaneka simahla ngaphakathi kubhaliso lwePlayStation Plus.
I-AI eyenziwe eSpain eyenza ukuwela kwinqanaba kukhuseleke e-United Kingdom
Ubukrelekrele bobugcisa bunokuvela eSpain, kakhulu kangangokuba banokugqibela ngokulawula ukuwela kwinqanaba kwi-United Kingdom yonke.
IOfisi 2019 iyeza kunyaka olandelayo ukuba ithathe indawo yeOfisi 2016
UMicrosoft ubhengeze ukumiliselwa kweOfisi 2019, inguqulelo entsha yeOfisi yesiqhelo embindini wonyaka olandelayo
Emva kweminyaka embalwa elubhacweni, iApple TV ibuyela eAmazon
Emva kweminyaka emibini ihambile, iApple TV iqala ukubonakala ngokuzolileyo kwivenkile yeAmazon, ngaphambi nje kokumiliselwa kwePrime Video app
I-Twitter icofa iifayile ezingama-280, sikubonisa indlela yokwenza umda omtsha
Sikubonisa ukuba singawusebenzisa njani umda omtsha wabalinganiswa abangama-280 abavavanywa ngabafana abasuka ku-Twitter kwiqela elincinci labasebenzisi.
I-Instagram ifuna ukuba ulawule izimvo ngolu hlaziyo
Ezi mpawu zintsha zokulawulwa kwezimvo zazifunwa kakhulu ngabasebenzisi abaninzi, kwaye ngokuqinisekileyo zifikile.
Sihlalutya i-m-net Power 1, iindleko eziphantsi kunye nebhetri eninzi
Le fowuni ivela e-Italiya ye-m-net ayenzi ngathi iyabonisa, ifuna nje ukugubungela iimfuno ezisisiseko njengokuzimela.
Iindlela zokubamba ukugcwala kwiwebhusayithi
Ngaba unayo iwebhusayithi okanye ibhlog kwaye ufuna ukutyelelwa? Qiniseka ukuba ulandela ezi ngcebiso zili-13 ukonyusa ukugcwala kwiphepha lakho lasimahla.
IMacOS ePhakamileyo yeSierra ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe
Inguqulelo yamva nje ye-macOS ngoku iyafumaneka ukhuphelo simahla ngeVenkile ye App yeMac
Ukubukela kweGPS ngabavavanyi bezinga lentliziyo
Ukukhangela iwotshi yeGPS enesimo sentliziyo? Ezi zezona zinto zilungileyo zokulinganisa kunye neewotshi ezifanelekileyo zokujonga imeko yakho yomzimba kunye nokubetha kwentliziyo.
Sihlalutya inkxaso ye-Oittm ye-iPhone kunye ne-Apple Watch
Siza kuthetha namhlanje malunga nesiseko sokutshaja se-Oittm ye-iPhone kunye neApple Watch, enkosi kuhlolo lwethu uya kwazi ukuba kufanelekile.
I-Twitter Lite ye-Android ngoku iyinyani
Isicelo se-Lite Lite sele siyinyani kwaye ilizwe lokuqala apho sele lifumaneka ukukhuphela yiPhilippines
I-Facebook iya kubonisa iintengiso ezisekwe kwiivenkile esizityelelayo
I-Facebook ibhengeze inkqubo yentengiso elandelayo ukuba iza kuphehlelela ijolise kwindawo yabasebenzisi.
Sihlalutya iFIFA 18, isenguKumkani webhola ekhatywayo yedijithali
Namhlanje siza kuhlalutya umdlalo wevidiyo yebhola ekhatywayo othengiswa kakhulu omiselwe ukuqhubeka nokulawula kulo nyaka, iFIFA 18.
I-iPhone 8 iyamelana ngakumbi kunokuba ibonakala ngathi uqala ukuyibona
Ngaphandle kwento enokubonakala ngathi uyibona kuqala, i-iPhone 8 entsha, esele ikho kwimarike, iyamelana kunokuba sonke besicinga.
INokia 8 ene6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina iqinisekisiwe
Inguqulelo ene-vitaminized yeNokia 8 ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina iya kufumaneka eYurophu ukusuka nge-20 ka-Okthobha
I-DxOMark iyisikelela ikhamera ye-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus ukuyithatha njengeyona nto ilungileyo ngalo mzuzu
I-iPhone 8 sele ikhona kwimarike kwaye ngokwe-DxOMark ikhamera yayo yeyona ilungileyo kwintengiso, ilindele inkulumbuso ye-iPhone X.
I-NASA ne-Russia ziya kusebenza kunye kuphuhliso lweSitishi seNdawo esitsha eNyangeni
I-Roscosmos, i-Arhente yeNdawo yaseRussia, ibhengeze nje ukuba izakudibana ne-NASA kuphuhliso lweSitishi seNdawo eNyangeni.
Uber uza kuyeka ukusebenza eLondon nge-30 kaSeptemba
Abafana abavela e-Uber bayibonile indlela ilayisensi ebavumela ngayo ukuba basebenze eLondon ikhatyiwe
Ngaba uyazi ukuba ... "Ukubhala kakuhle kuhle"?
I-Wiko kunye neLa Vecina Rubia bajoyina imikhosi yokuqalisa ukuBhala kuhle, sisicelo sokwenza abasebenzisi bazi ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo kopelo
Yintoni iLitecoin kunye nendlela yokuthenga iLitecoin?
I-Litecoin yindawo-ukuya-kwinqanaba (P2P) yemali yedijithali esekwe kwisoftware evulekileyo. Fumanisa ukuba phi kwaye phi ukuthenga iLitecoins ngokukhuselekileyo ngeSpanish.
Ngaba kufuneka uqwalasele umzila? Fumanisa lonke ulwazi ukufikelela kwi-router kwaye utshintshe ubumbeko, ipassword, amazibuko, igama lenethiwekhi kunye nokunye
Izizathu ezi-7 zokuthenga i-iPhone X
Ngaba uyafuna ukuthenga i-iPhone X? Nazi izizathu ezi-7 zokuba kutheni kufuneka uchithe imali yakho ukuthenga i-iPhone X hayi enye iselfowuni.
IOS 11 kunye neewatchOS 4 zifika ngokusesikweni kwiimveliso zeApple
Umzuzu wenyaniso ufikile, ingxelo esemthethweni ye-iOS 11 ikwiseva kwaye unokuzikhuphela, kunye ne-watchOS 4 ukusukela ngoku.
Uhlalutyo lweParrot Mambo, idrone encinci ekufuneka uyiqwalasele
IParrot Mambo yeyona mini idrone efanelekileyo yabaqalayo ngenxa yokuphathwa lula kwayo. Umgqomo kunye nezibopho ezibandakanyiweyo ebhokisini zenza kube mnandi kakhulu.
I-CCleaner inesifo seTrojan, hlaziya ngoku ukuze uyisuse
Kufunyenwe iTrojan kwiifayile zokufaka zeCCleaner, ke hlaziya kuhlobo lwamva olucocekileyo
I-Fortnite isebenze ukudlala phakathi kwe-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One okokuqala
I-Fortnite ngumdlalo wokuqala ovumele le nkqubo ifunwa kakhulu, kwaye kubonakala ngathi akukho mntu ubonile, kude kube ngoku.
Eli lixabiso lePorsche Mission E, imoto yezemidlalo yombane
Ukongeza kwiTesla, sele kukho abo babheja kwiimoto zombane kwiimodeli zabo zexesha elizayo. Okwangoku sele zikhona iimoto ezixineneyo ...
Uyenza njani imimiselo yokwabelana Windows 10 efihliweyo ngokungagqibekanga
Namhlanje sikubonisa indlela yokwenza useto lokwabelana ngaphakathi Windows 10, efihliweyo ngokungagqibekanga kwaye apho siya kuthi sifumane okuninzi kuyo.
Sihlalutya i-Oittm Smart Aroma Diffuser edityaniswe nesidumisi
Siphonononge i-Oittm Smart Aroma Diffuser, isixhobo esidibanisa ne-intanethi esidibanisa ne-humidifier kunye ne-diffuser yoyilo olugqwesileyo
Kwaye abaphathi be-Uber baqeshwe ngokungathi ngoo-freelancers
Inkundla yaseBarcelona igweba u-Uber ukuba abamkele ubukhulu bomnye wabaphathi bakhe awayebaqeshile njengenkampani
Indawo yokudlala yomdlali engaziwayo iphula iirekhodi zeStam kwaye iyaqhubeka nokukhula
Kwaye yenze njalo iPUBG kwakhona, ibetha irekhodi labadlali ngaxeshanye kwi-Steam yokuba i-Dota2 ilawula kude kube ngoku.
IBlueBorne, umngcipheko ochaphazela ngaphezulu kwezixhobo ezizizigidi ezingama-5.000 kwihlabathi liphela
Ukungena apho siza kuthetha ngeBlueBorne, umngcipheko obaluleke kakhulu kuyo nayiphi na inkqubo yeBluetooth echaphazela ngaphezulu kwezixhobo ezibhiliyoni ezi-5.000.
I-Honda Urban EV Concept, umbane waseJapan onendlela yaseJamani
I-Honda Urban EV Concept yimoto yokuqala yombane yeJapan. Ukongeza, ukucwangciswa kwenethiwekhi yombane ekrelekrele kucwangcisiwe.
UGoogle Chrome uza kuyeka ukudlala umxholo onesandi ngokuzenzekelayo
UGoogle Chrome uyakusivumela kwakamsinya ukuba singavuseleli ukuveliswa okuzenzekelayo komxholo onesandi esikhathaza phantse sonke namhlanje.
Olu lwakhiwo lwekhompyuter luthembisa ukuguqula umhlaba wekhompyuter ye-quantum
Olu phando lutsha luqhutywa yiDyunivesithi yaseNew South Wales (Australia) lusinika uyilo olutsha lwekhompyuter ye-quantum.
Ixesha lokugqibela loMdlalo weZihlalo zobukhosi liya kuba neziphelo ezininzi ezirekhodiweyo ukunqanda ukuvuza
I-HBO ithathe isigqibo sokwenza izinto zibe nzima kukuvuza kwaye oku kuya kubhala amanqaku okuphela kwexesha elitsha leMidlalo yeTrone
I-Audi Aicon, enye indlela yokuzimela yeJamani ene-800 km yokuzimela
I-Audi Aicon yingcinga yokuba le nkampani ithiwe thaca kuMboniso weZithuthi waseFrankfurt ngo-2017.